Ihe mkpuchi Kn95, mkpuchi mkpuchi, ihe nchekwa enwere ike iwepu - VTECH CHINA
Akpụkpọ anụ enyi na enyi anaghị kpara akwa
Safety 3s dị nro anaghị kpara akwa
Akwa arụmọrụ agbaze agbaze
Ruo 95% arụmọrụ filtration
Mpempe imi nke aluminom
Jiri nwayọ dozie dabara ma belata iku ume nke ihe ndị na-emerụ ahụ.
Elu eriri roba na-agbanwe
Ultrasonic ịgbado ọkụ, banye ọsụsọ na ọ bụghị uko
Ihe mkpuchi ihu 3D nwere ike ịtụfu Ntị-acha ọcha
GB2626-2006 ihe mkpuchi KN95
Ihe mkpuchi iku ume KN95 CE/FDA enwetara
Ihe mkpuchi mkpuchi uzuzu KN95
Ihe mkpuchi ihu mgbochi uzuzu KN95 enwere ike ịtụfu
Kedu ihe kpatara ịhọrọ VTECH
Ndị nrụpụta ọkachamara KN95
VTECH CHINA CO., LTD bụ ọkachamara na-emepụta ihe mkpuchi nchebe nke KN95. Ụlọ ọrụ ahụ na-eji ogbako na-enweghị uzuzu, ụlọ nyocha ngwaahịa na usoro nchekwa ahaziri maka akụrụngwa na ngwaahịa emechara.
Ejiri USA-FDA, EU-CE, na China-GB gbaara ngwaahịa anyị asambodo ọkachamara.
12 nkpuchi mmepụta ahịrị
Enwere ahịrị mmepụta 12 nke ihe mkpuchi mkpuchi KN95 nwere mmepụta 1,000,000 kwa ụbọchị.
Mbupụ na ọtụtụ mba
Ihe mkpuchi VTECH KN95 abụghị naanị ire ere n'ụlọ, kamakwa ebuga ya na Europe, USA, Panama, wdg.
Ihe nzacha nchekwa
5 n'ígwé nchedo nzacha
Skin enyi na enyi & Safety 3s dị nro anaghị kpara akpa
ákwà gbazere agbaze
Ethylene-propylene nzacha sponge
100% ES, mkpuchi, nnabata mmiri
PP na-abụghị kpara iche oyi akwa
Filtration nke obere irighiri ihe
chebe onwe gị na ndị gbara gị gburugburu.
Julaị 18, 2020
Ịchekwa ndụ bụ naanị ebumnuche China nwere n'azụ enyemaka zuru ụwa ọnụ, Wang kwuru
China anọwo na-enyere mba ndị ọzọ aka ịlụ ọgụ COVID-19 na naanị ebumnuche ịgbalị ịzọpụta ọtụtụ ndụ dị ka o kwere mee, onye ndụmọdụ steeti na Minista mba ofesi Wang Yi kwuru na Sọnde.Na ọgbakọ ntaakụkọ emere na...
Gbaa mbọ hụ na ahụike iku ume bụ nchụso anyị ebighi ebi
BEIJING - Ndị na-achịkwa China ewerela usoro ọhụrụ iji mee ka njikwa mma na mbupụ nke ọgwụ na-ahụ maka ahụike na ịhazigharị usoro ndị na-apụ apụ iji nyere aka n'ọgụ zuru ụwa ọnụ megide ọrịa coronavirus ọhụrụ.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ VTECH CHINA CO., LTD.bụ ọkachamara na-emepụta ihe mkpuchi mkpuchi KN95.Ụlọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ na-enweghị uzuzu, ụlọ nyocha ngwaahịa na usoro nchekwa ahaziri maka akụrụngwa na ngwaahịa emechara.